प्रचण्डमाथिको प्रश्न गम्भीर छ
प्रचण्ड प्रभावशाली नेता हुन् । प्रचण्ड जत्तिको नेता राजनीतिमा छैनन् । यो सत्य हो । तर प्रचण्डभन्दा आलोचित नेता पनि छैनन् । यसकारण प्रचण्ड राजनीतिको केन्द्रमा छन् । उनले चाहे सुधार्न सक्छन्, उनले नचाहदा राष्ट्र यसैगरी असरल्ल भइरहने छ ।
नेता कस्तो हुनुपर्छ, नेताको आचरण र नैतिकता शुद्ध हुनुपर्छ कि पर्दैन ? लोकतन्त्रको यो अहं प्रश्न यसकारण प्रचण्डमाथि उठेको छ कि उनी किङ्पिन हुन् । उनको सम्पत्ति विवरण र उनको रहनसहनले प्रचण्डलाई आदरणीयको शिखरबाट ज्यादै तल खस्काएको छ । यहीकारण रवीन्द्र मिश्रले समेत प्रश्न उठाए– आम्दानीको आधारमा भन्ने हो भने प्रचण्डलाई अमेरिका त कुरै छोडिदिउा नेपालको निजी अस्पतालमा समेत उपचार खर्च बेहोर्न गाह्रो पर्छ । तर उनी सिंगापुर, अमेरिका गए । कहााबाट आयो पैसा ? उपचारका लागि परिवार सहित बारम्बार विदेश जाादा विदेशी मुद्रा कसरी लगिरेहका छन् ?
प्रश्न यसकारण पनि गम्भीर छ कि राज्यसाग डलर नभएर राष्ट्र बैंकले विदेश जाने जो कोहीलाई वर्षको एकपटक १५ सय डलर दिने सर्कुर गरेको छ । निश्चय नै प्रचण्डका लागि यति डलर हात्तीको मुखमा जिरा हो । अनि भुरे टाकुरे नेताले पनि प्रश्न गर्नु स्वभाविक हो र नेताले लोकतान्त्रिकरण हुने हो भने आफूलाई पारदर्शी राख्नैपर्छ । अन्यथा राजन केसीजस्ता व्यक्तिसाग चुनाव लड्न पनि प्रचण्डलाई मुस्किल परेको हो, पर्दै जानेछ ।
प्रचण्ड तिनै हुन् जो जनयुद्धकालमा भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर युवालाई बन्दुक बोकाएका हुन् । बन्दुकले सत्तामा पटक पटक सत्तामा पु¥यायो, एक कठ्ठा जग्गा र ३ लाख सम्पत्ति भएका नेता बारम्बार उपचार गर्न, घुम्न सिंगापुर, बैंकक, अमेरिका गइरहन्छन् । प्रश्न त उठ्छ– आम्दानीको स्रोत के हो ? यो कर्मचारीको होइन, सार्वभौम जनताको प्रश्न हो भनेर मनन गर्नु उचित होला ।
यो सवालमा प्रचण्डले जवाफ दिन जरुरी छ ।